Ndira 14, 2015 pa 1:35 ndiri
Tinokutendai zvikuru basa rako rakaoma uye nokuda kwenyu Plugin GREAT!
Ndinoshuva kuti mukuru negoho iyi New 2015 Gore!
Uye ndinofunga vazhinji vose vanobvumirana neni, ungada kuona oftener reserved 😉
Thanks zvakare, uye kumirira ichi zvikuru zvinhu!
Kukadzi 18, 2015 pa 4:36 ndiri
Kuramba basa guru, murume! Saka farai Ndakawana Transposh uye acharamba kukutsigira Zvisinei ndinogona. Bravo!
Steen Grønfeldt anoti
Kurume 6, 2015 pa 4:58 pm
Iyi ndiyo nguva yokutanga Ndinoona plugin yako – Ndinofanira kupa Jer, zviri zvakanaka ngwara! Ndakashanda kuva mushanduri kwemakore akawanda, uye pano ndichava mberi tichishanda pamwe – achaedza kupa mupiro wangu nokuvandudza Danish shanduro peji!